राेचक संसार Archives - ramechhapkhabar.com
काठमाडौं । खानामा कपाल पर्नु, झर्नु वा भेट्टिनु साधारण कुरा हो । शरीरकै अंग भएकाले खानामा कपाल पर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । खाना तयार पार्दा, पकाउँदा, पस्किदा वा खाना लाग्दा कहिँकतैबाट पनि खानामा कपाल पर्न सक्छ। तर खानामा कपाल पर्दा वा भेटिदाँ धेरैलाई...
खुट्टा गन्हाउने समस्या छ ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा
काठमाडौं । गर्मी लागेसँगै धेरै मानिसमा खुट्टा गन्हाउने समस्या हुन्छ । जुत्ता लगाएर धेरैबेरसम्म बसिरहँदा खुट्टा गनाउने समस्या झनै बढेर जान्छ । खुट्टा गन्हाउने समस्यामा कागतीको प्रयोग निकै लाभदायक मानिन्छ । राति सुत्नुअघि खुट्टामा मोजा लगाइ त्यसभित्र कागती राखेर सुत्दा खुट्टा गन्हाउने समस्याबाट छुटकारा...
काठमाडौं । राम्रो कसलाई भन्ने ? आकर्षक को हुन् ? यसमा सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । भूगोल र समुदाय अनुसार सुन्दरताको मापन पनि भिन्न भिन्नै हुनसक्छ । कतै कालो छाला मन पराइन्छ भने, कतै गोरो । कतै पातलो ओंठलाई आकर्षक मानिन्छ, त कतै...
के तपाईको घरमा साङ्लाले सताएको छ ? २ मिनेटमै यसरी भगाउन सकिन्छ
काठमाडौं । गर्मी सिजनमा खानेकुरा चाँडै सड्ने गर्छ । त्यसमथि झिँगा र साङ्लाले खानेकुरा दूषित बनाइदिन्छ । झिँगा त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर साङ्ला फैलिएपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ।खासगरी भान्साको कुनाकाप्चामा बस्ने साङ्ला शौचायलको ढल जस्ता ठाउँमा पनि सुरक्षित हुने गर्छ । यसरी जहाँपनि...
काठमाडौं । रुद्राक्ष विशेष किसिमको वृक्षको दाना हो । साधारणतया, यो पहाडी क्षेत्रहरूको निश्चित उचाइमा वा हिमालयमा पाइन्छ । अचेल नेपाल, बर्मा, थाइल्यान्ड र इन्डोनेशियामा रुद्राक्षको वृक्ष पाइन्छन् । दक्षिण भारतको पश्चिमी घाटको केही क्षेत्रहरूमा यसका रूख पाइन्छन् । तर, उच्च गुणस्तरको रुद्राक्ष हिमाली...
प्रजनन् क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउन पुरुषहरुले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
काठमाडौं । आधुनिक जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपानका कारण कारण पुरुषहरुमा शुक्राणुको संख्या अर्थात बीर्य उत्पादनको दर कम हुँदै गएको छ । यसले उनीहरुको प्रजनन क्षमतामा समेत असर गरेको छ । बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले आधुनिक जीवनशैली अपनाएका पुरुषको प्रजनन् क्षमतामा नकारात्मक असर परेको देखाउँदै...
घरको कुन दिशामा कुन विरुवा रोप्ने ? यसो भन्छ वास्तुशास्त्र
काठमाडौं । घरमा फुलहरुका विरुवा रोप्न कतिको मन पराउनुहुन्छ ? तपाईले लगाउनु भएको विरुवाले वातावरणलाई ताजा, रमाइलो त बनाउँछ नै यसले घरमा सकारात्मक वा नकारात्मक ऊर्जा पनि पैदा गर्दछ । तसर्थ, सही बिरुवाको छनोट गर्न र घरमा राख्ने दिशा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथा...
ओछ्यानको तन्ना किन चाडै बदल्नुपर्छ ? यति धेरै दिनमा फेर्नुहुन्छ भने होसियार हुनुहोस्
काठमाडौं । कति दिनमा आफ्नो ओछ्यानको तन्ना फेर्नुपर्छ वा धुनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई धेरैले हल्का मान्न सक्छन्। केहीलाई यो सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्न नहुने विषय पनि लाग्न सक्छ । तर यो हरेक मानिसलाई असर गर्ने विषय हो। हालै बेलायतका २,२५० वयस्कमा गरिएको सर्वेक्षणले ओछ्यानका तन्ना...
जब महिलाले आफैले पालेको बिरालोसँग विवाह गरेपछि…
काठमाडौं । एक महिलाले हालै आफ्नो बिरालोसँग विवाह गरिन् । यो सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो कुरा सत्य हो । यो बिरालोको नाम इन्डिया हो । बिरालोसँग बिहे गर्ने महिलाको नाम डेबोरा होग हो । उनी लण्डन निवासी हुन् । हगले...
काठमाडौं । कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? कतिपय कुराहरु यस्ता हुन्छन् जुन हामीले हरेक दिन देख्दै र भोग्दै आएका हुन्छौँ । तर ति कुराहरुको भित्रि रहस्य हामीमध्य धेरैलाई जानकारी नै हुँदैन । आज हामी त्यस्तै एक प्रशंगका विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका...
123 … 26 पछिल्ला »